पत्याउनु हुन्छ ? बाँदरले पनि शोक मनाउँछन्, पुरा बढ्नुहोस् - ramechhapkhabar.com
पत्याउनु हुन्छ ? बाँदरले पनि शोक मनाउँछन्, पुरा बढ्नुहोस्
चकचके जनावरको कुरा गर्दा बाँदर नै पहिलो नम्बरमा आउँछ होला। यो जनावर जति चकचके भए पनि बुद्धिमान हुन्छ। यसले गणना पनि गर्न सक्छ। बाँदरका बारेमा जानौं केही रोचक तथ्य।
विश्वमा करिब २६० प्रजातिका बाँदर पाइन्छन्। अष्ट्रेलिया र अन्टार्कटिकामा बाहेर संसारका हरेक ठाउँमा बाँदर पाइन्छन्। अफ्रिका र एसियामा पाइने बाँदर पुराना र दक्षिण अमेरिकामा पाइनेलाई नयाँ बाँदर भनिन्छ। पुराना बाँदरका ३२ वटा दाँत हुन्छन् भने नयाँका ३६ वटा। प्रजातिअनुसार बाँदर १० देखि ५० वर्षसम्म बाँच्नसक्छ।
बाँदरका अधिकांश प्रजाति रूखमा बस्छन्। कतिपय जमिनमा बस्ने खालका पनि हुन्छन्। यिनीहरू दिनचर(दिउँसो गतिविधि गर्ने हुन्छन्। बाँदरको एकमात्र प्रजाति रात्रिचर(रातिमा गतिविधि गर्ने) हुन्छ। जसलाई उल्लु बाँदर भनिन्छ। मानिसको जस्तै यिनीहरूको पनि फिंगरप्रिन्ट हुन्छ। बाँदर एक सामाजिक प्राणी हो। यिनीहरू समूहमा खान्छन्, सुत्छन् तथा यात्रा गर्छन्। प्रजातिअनुसार यिनीहरूको समूहमा केही बाँदरदेखि लिएर हजारौं हुन सक्छन्। यिनीहरू आवाज, शारीरिक हर्कत तथा अनुहारको हाउभाउबाट आपसमा संवाद गर्छन्।
प्रायः बाँदरहरू एकआपसमा इसारामा कुरा गर्छन्। मानिसको जस्तै यिनीहरू पनि भावनामा बग्छन्। एक–आपसमा प्रेमभाव दर्शाउँछन्। तालिम दियो भने बाँदरहरू आफूलाई ऐनामा हेरेर चिन्न सक्छन्। यिनीहरू सर्वहारी हुन्छन्। मलेसिया तथा थाइल्याण्डमा नरिवल टिप्न बाँदरलाई राख्ने चलन छ। जापानको एउटा रेष्टुरेन्ट छ जहाँ बाँदरले वेटरको काम गरेको देख्न सकिन्छ।
ग्रीसका राजा अलेक्जेन्डर–१ को बाँदरले टोकेर मृत्यु भएको थियो। प्रत्येक वर्ष १४ डिसेम्बरमा विश्व बाँदर दिवस मनाइन्छ। मानिसको जस्तै बाँदरको पनि आँखा कमजोर हुनसक्छ। कुनै बाँदरले आफ्नो दाँत सफा गर्छन्। बाँदरले केरा ताछेर खान्छन्। यिनीहरू संख्या गन्न सक्छन्। यो जनावर ५५ किलोमिटर प्रतिघन्टाको गतिमा दौडन सक्छ।
मानिसजस्तै केही प्रजातिका बाँदर कसैको मृत्युमा शोक मनाउँछन् भने कुनै कुरामा खुसियाली पनि मनाउँछन्। कुनै प्रजातिका बाँदरहरू खानेकुरा पखालेर खान्छन्। संसारको सबैभन्दा ठूलो बाँदर ३५ किलोग्रामको पाइएको छ। कुनै–कुनै बाँदरको लामो–लामो जुँगा पनि हुन्छ। संसारको सबैभन्दा सानो बाँदर मुसा जत्रै हुन्छ।